Sekela i-ICRA bese ulebula okuqukethwe kusayithi lakho | Martech Zone
NgoLwesibili, Septhemba 19, 2006 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
UMnyango wezoBulungiswa ukubambelela isinqumo sokuthi ukufaka iwebhusayithi yakho kokuqukethwe akuphuli inkulumo yakho yamahhala. Yize ngisekela i- I-Electronic Frontier Foundation, lolu wudaba olulodwa engivame ukungavumelani nalo. Ngicabanga ukuthi amasayithi kufanele afakwe ilebula futhi Iziphequluli kufanele ziqhubeke nokuhlonipha izilawuli zabazali. Ngingathanda nokubona izinjini zokucinga zisebenzisa amalebula wokuqukethwe futhi:
Ukunikeza amawebhusayithi anamalebula wokuqukethwe futhi akukho zikhalazo ezibekiwe ezinjini zokusesha eziphakeme.
Ukunikeza Injini yokusesha ehlukile kokuqukethwe kwabantu abadala.
Ukulebula indawo yakho kulula ngama-ICRA Ilebula Generator. Funda kabanzi mayelana ne- service. Ngibhala wonke amawebhusayithi ekhasimende lami, nawe kufanele! Indlela yokwenza ilebula yinhle impela, ivumela abantu ukuthi bacacise ukuthi ubunqunu benziwa ngobuciko yini hhayi ngokusobala. Angicabangi ukuthi umfowethu omkhulu lona. Ngicabanga ukuthi lokhu kumane nje ukuhlinzeka ngezinga elithile lokuqapha ukuvikela izingane zethu kwi-porn. Ngiyethemba uyavuma!
Okthoba 5, 2006 ngo-7: 21 AM
Ngisanda kubhalisela lokhu. Angikaze ngivumelane nokucwaninga kodwa ngikholelwa ukuthi abantu kufanele babe nokuzikhethela. Abantu abaningi ngeke bafune ukubona ibhulogi yami - ihlanganisa izihloko ezifana namasiko ezitabane, ubuthakathi kanye nobuqaba phakathi kwezinye izinto eziningi njengezindaba ezijwayelekile nemibono, futhi, empeleni, izinkondlo nokunye ukubhala okudala. Ngingahle ngingathandi ukuthi abanye bazokwenqaba umsebenzi wami ngesisekelo sezinkolelo zami ezithandwayo kepha ngokufaka lokhu kusayithi lami, ngicabanga ukuthi ngivumela abanye ukuthi benze lokho abafuna ukukwenza ngenkathi ngikhululekile ngokuphelele ukwenza engifuna ukukwenza yenza futhi!
Yayinhle. Siyabonga ngolwazi. x